Bafuna kuxoxwe ngezokubuyusa isibhakela
UMORUTI Mthalane ukhala ngokuthi isibhakela naso sibuyiswe njengezinye zemidlalo ezikhululwe kwiCovid-19 Isithombe: ZIPHOZONKE LUSHABA
ZAKHELE XABA | June 12, 2020
UMPETHA we-International Boxing Federation (IBF), uMoruti Mthalane, uphakamisa ukuthi ikhulunywe eyokubuyiswa kwesibhakela eNingizimu Afrika kodwa kubekwe phambili ukuphepha kwamabhokisa.
Isibhakela asikho ohlwini lwezemidlalo ezigunyazwe nguhulumeni ngeledlule ukuthi zibuye ngenxa yokuthi kuyathintwana kusona. Emhlabeni wonke amankomane amisiwe ngenxa yokudlanga kwegciwane iCovid-19.
E-United Kingdom inhlangano yesibhakela yakhona seyenze izethulo kuhulumeni ngokuzokwenziwa, ukuze kubuye isibhakela ngendlela ephephile. Enye yazo wukuthi kuhlolwe amabhokisa, abaqeqeshi, amajaji nonompempe kusasele izinsuku ezimbili kuliwe. Abalandeli abavumelekile.
UMthalane, waseMpendle KwaZulu-Natal, uthe naseMzansi ayikhulunywe eyokubuyela eringini.
“Kufanele sibheke indlela yokubuyela eringini kodwa okuphambili kube wukuphepha kwamabhokisa nabo bonke abantu abahlanganayo ngosuku lwempi,” kusho uMthalane, olindwe yimpi ehlanganisa izicoco noJulio Cezar Martinez.
"Mhlawumbe kungasebenza ukuthi bahlolwe, bahlale ndawonye kuze kube wusuku lwempi. Kufanele sibuye isibhakela ngaphansi kwemibandela eqinile khona kungeke kuthelelwane ngegciwane,"
Ezinye zezinto eziphakanyiswe e-UK, wukuthi angabi khona amabhakede amabhokisa athimisela kuwo uma esekhoneni, nokuthi abaqeqeshi namajaji bafake izifonyo ngaso sonke isikhathi, kuthi unompempe azidlubhe zonke ezokuzivikela.
Amabhokisa azofaka izifonyo uma esangena eringini kuphela.
“Kunzima ukuhlala kanje ngoba amabhokisa aziphilisa ngaso isibhakela. Ngakolunye uhlangothi uma abalandeli bengekho, abaxhasi ngeke bavume ukufaka imali egcina isiza ekukhokheleni amabhokisa. Kodwa ekugcineni kufanele kubuyelwe eringini ngoba asazi ukuthi leli gciwane lizophela nini,” kusho uMthalane.
Ngempelasonto edlule, isikhulu esiphezulu seBoxing South Africa, uTsholofelo Lejaka, sihambele amajimu ase-East London nawasePort Elizabeth, ukuyobheka senze umbiko ngesimo nendlela okungenziwa ngayo ukuze kubuyiswe isibhakela.
Ukhale ngokugcwala kwawo nokuzokwenza kube nzima ukuqhelelana nokuntuleka kwezinsiza.